Akụkọ - Ihe dị mkpa achọrọ maka ihe nkwakọ ngwaahịa hose
Ihe ndị dị mma chọrọ maka ihe nkwakọ ngwaahịa hose
tube dị nroa na-ejikarị ihe nkwakọ ngwaahịa eme ihe maka ịchọ mma.A na-ekewa ha na tubes gburugburu, tubes oval, tubes dị larịị, na tubes dị larịị na nkà na ụzụ.Dị ka usoro ngwaahịa ahụ si dị, a na-ekewa ya n'ime otu oyi akwa, okpukpu abụọ na nkedo ise.Ha dị iche na nguzogide nrụgide, mgbochi permeability na mmetụta aka.Ala.
01 Isi ihe achọrọ maka ọdịdị hose
1. Ọdịdị chọrọ: N'ụkpụrụ, n'okpuru ọkụ ọkụ ma ọ bụ 40W fluorescent oriọna, nlele anya n'ebe dị anya nke ihe dịka 30cm, na-enweghị ọdịdị elu elu, embossing (enweghị twill na ọdụ), abrasions, scratches, na ọkụ.
2. Dị nro n'elu, dị ọcha n'ime na n'èzí, edo glazing, na-agbanwe agbanwe glossiness na ọkọlọtọ nlereanya, ọ dịghị doro anya irregularities dị ka unevenness, redundant n'ọnyá, scratches ma ọ bụ indentations, deformation, wrinkles, wdg, ọ dịghị mba ọzọ adhesion, obere na-ekwekọghị ekwedo tụrụ n'ebe ahụ. ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 5 hoses.Ọ bụrụ na net ọdịnaya nke sooks bụ ≥100ml, 2 blooms na-ekwe;Ọ bụrụ na net ọdịnaya nke sooks bụ ihe na-erughị 100ml, 1 oge ntoju kwere.
3. The tube ahụ na mkpuchi dị larịị, na-enweghị n'ihu, ọ dịghị mmebi, ọ dịghị eri ntụpọ, tube ahụ na- tightly mechie, akara ọdụ akara na-asọfe, na akara obosara bụ otu.Ụdị ọkọlọtọ nke ịdị elu akara akara bụ 3.5-4.5mm, otu alaka ahụ dịkwa nro.The ekwe ndiiche nke tube akara ọdụ ahịrị ịdị elu bụ ihe na-erughị ma ọ bụ hà 0.5mm.
4. Mmebi (pipụ ma ọ bụ okpu mebiri ma ọ bụ rere ure n'ọnọdụ ọ bụla);emechiri emechi;agba oyi akwa n'elu nke eriri ahụ kwụsịrị> 5 square millimeters;ọdụ na-agbawa;ọgwugwu eje-ikwa-a;eri na-agbaji nke ukwuu.
5. Ịdị ọcha: n'ime na n'èzí nke eriri ahụ dị ọcha, na e nwere unyi doro anya, ájá na ihe ndị mba ọzọ n'ime tube na mkpuchi.Ọ dịghị ihe si mba ọzọ dị ka ájá na mmanụ, ọ dịghị pụrụ iche isi, na izute ịdị ọcha chọrọ nke ịchọ mma-ọkwa nkwakọ ihe: ya bụ, ọnụ ọgụgụ nke colonies ≤ 10cfu, E. coli, Pseudomonas aeruginosa na Staphylococcus aureus agaghị achọpụta.
02 Ọkpụkpụ eluọgwụgwọ na graphic obibi chọrọ
Ngbanwe ọnọdụ overprint dị n'etiti oke elu na nke ala nke akụkụ abụọ ahụ kwadoro (≤± 0.1mm), na enweghị ghosting.
Eserese na ederede doro anya na zuru oke ma kwekọọ na agba nke ihe nlereanya ahụ.The agba iche nke tube ahu na ya e biri ebi ndịna-emeputa na ederede adịghị gafere agba iche nso nke ọkọlọtọ nlereanya.
Ogo nke ederede yiri ọkọlọtọ ọkọlọtọ, enweghị njigide, adịghị ike, enweghị oghere, na enweghị mmetụta na nnabata.
Ụdị mkpụrụedemede ahụ e biri ebi enweghị ihe pụtara ìhè, akụkụ ink, ziri ezi, enweghị typos, mkpụrụedemede na-efu, akara edemede na-efu, mkpịsị akwụkwọ ederede na-efu, enweghị nkọwa, wdg.
2. Eserese: Mpempe akwụkwọ na-emebiga ihe ókè bụ nke ziri ezi, njehie nbibi nke akụkụ bụ isi bụ ≤1mm, na njehie nke akụkụ nke abụọ bụ ≤2mm.Enweghị ntụpọ heterochromatic doro anya na mkpọtụ
N'ihi na hoses nwere net ọdịnaya ≥ 100ml, n'ihu n'akụkụ na-ekwe ka nwere 2 ntụpọ ọ bụghị ihe karịrị 0.5mm, otu ngụkọta ebe ọ dịghị ihe karịrị 0.2mm2, na azụ na-enye ohere 3 ntụpọ ọ bụghị ihe karịrị 0.5mm, na otu mkpokọta ebe. ọ bụghị ihe karịrị 0.2mm2.;
N'ihi na hoses nwere net ọdịnaya <100ml, otu ntụpọ na-enweghị ihe karịrị 0.5mm n'ihu, a ngụkọta ebe nke ọ dịghị ihe karịrị 0.2mm2, na abụọ tụrụ na azụ na-enweghị ihe karịrị 0.5mm na a ngụkọta ebe nke . anabataghị ihe karịrị 0.2mm2..
3. Ngbanwe okirikiri
N'ihi na ụgbụ net ọdịnaya ≥100ml, ndị vetikal deviation nke na-ebi akwụkwọ efere ọnọdụ agaghị gafere ± 1.5mm, na ekpe na aka nri deviation agaghị gafere ± 1.5mm;
N'ihi na ụgbụ net ọdịnaya <100ml, vetikal deviation nke na-ebi akwụkwọ efere ọnọdụ agaghị gafere ± 1mm, na ekpe na aka nri deviation agaghị gafere ± 1mm.
4. Ọdịnaya chọrọ: kwekọrọ na ihe nkiri ahụ na ihe nlele nke onye na-eweta ya na onye zụrụ ya kwadoro
5. Agba dị iche: na-ebi akwụkwọ na na-ekpo ọkụ stamping agba bụ otu ihe ahụ samples kwadoro site soplaya na onye na-azụ ihe, na agba deviation bụ n'etiti elu na ala ịgba agba kwadoro site abụọ ọzọ.
03 Ihe ndị dị mkpa maka nhazi ngwaahịa ngwaahịa
1. Nkọwa na akụkụ: A na-atụ ya na vernier caliper dị ka ihe ndị a chọrọ nke ịbịaru ihe osise si dị, na ntachi obi dị n'ime ebe a kapịrị ọnụ nke eserese: njedebe kachasị ike nke dayameta bụ 0.5mm;kacha mma ekwe ndiiche nke ogologo bụ 1.5mm;kacha mma ekwe ndiiche nke ọkpụrụkpụ bụ 0.05mm;
2. Ihe dị arọ chọrọ: tụọ ya na nguzozi na nguzozi nke 0.1g, na uru ọkọlọtọ na njehie a na-ekwe ka ọ dị n'ime nkwekọrịta nkwekọrịta nke akụkụ abụọ ahụ: njedebe kachasị ike bụ 10% nke ịdị arọ nke ọkọlọtọ ọkọlọtọ;
3. Ikike ọnụ: Mgbe emejuchara mmiri na mmiri na 20 ℃ na ọnụ nke akpa ahụ dị larịị, ogo mmiri na-ejuputa na-anọchi anya ikike ọnụ nke akpa ahụ, uru ọkọlọtọ na oke njehie dị n'ime nkwekọrịta nkwekọrịta nke akụkụ abụọ ahụ: kachasị elu. ndahie nke a na-anabata bụ ikike ọnụ ọnụ nke ọkọlọtọ 5%;
4. Ọkpụrụkpụ edo edo (dị mma maka hoses nwere ọdịnaya nke 50ML ma ọ bụ karịa): Bee akpa ahụ ma jiri nha nha nha nha 5 n'akụkụ elu, etiti na n'akụkụ ala, yana oke ikike ekwe omume abụghị ihe karịrị 0.05mm
5. Ihe ndị a chọrọ: Dị ka ihe ndị e depụtara na nkwekọrịta nke onye na-eweta ya na onye na-achọ ya bịanyere aka na ya, a ga-eme nyocha ahụ na-adabere n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ mba kwekọrọ na ya, nke kwekọrọ na ntinye akara.
04 Ihe ndị bụ isi chọrọ maka mkpuchi eriri
1. Usoro akara na udi na-emezu ihe achọrọ nke nkwekọrịta n'etiti akụkụ abụọ ahụ.
2. Akụkụ akara nke ukwuu na-akwado nkwekọrịta nkwekọrịta nke akụkụ abụọ ahụ.
3. Ọdụ akara akara dị n'etiti, kwụ ọtọ, na ọdịiche dị n'etiti aka ekpe na aka nri bụ ≤1mm.
4. Ike nke akara:
Jupụta oke mmiri akọwapụtara ma tinye ya n'etiti efere elu na nke ala.Akụkụ nke mkpuchi kwesịrị ịkwaga na efere ahụ.N'etiti akụkụ nke efere elu, pịa 10kg ma debe ya maka 5min., Enweghị mgbawa ma ọ bụ ntapu na ọdụ.
Jiri egbe ikuku tinye 0.15Mpa ikuku ikuku na sooks maka 3 sekọnd.Enweghị ọdụ na-agbawa.
05 chọrọ nhazi nke hoses na ngwa
1. Na-arụkọ ọrụ na tightness
Nnwale Torque (nke dị na ntinye nke eriri): Mgbe ejiri eriri nke 10kgf / cm mechie okpu eri ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri, eriri na okpu agaghị emebi emebi na ezé agaghị adapụ.
Ike mmeghe okpu (adabara ọbụna nchikota okpu okpu): ike mmeghe na-agafeghị oke
2. Mgbe dabara adaba, eriri na mkpuchi agaghị agbagọ.
3. Mgbe e jikọtara ihe mkpuchi nke ụdọ ahụ, ọdịiche ahụ bụ otu, na oghere adịghị egbochi ya site na iji aka gị metụ oghere ahụ aka.Oghere kachasị dị n'ime oke nke akụkụ abụọ ahụ kwadoro (≤0.2mm).
4. Nnwale ikesi ike:
Mgbe etinyechara eriri ahụ na ihe dịka 9/10 nke ikike mmiri kachasị, kpuchie mkpuchi dabara (ọ bụrụ na enwere plọg dị n'ime, ekwesịrị ịkwado plọg dị n'ime), ma tinye ya n'ime igwe na-ekpo ọkụ ka ọ na-ekpochapụ ruo -0.06 MPa ma debe ya maka nkeji 5 na-enweghị ntapu.;
Jujuo akpa ahụ na mmiri dị ka ihe dị n'ime akpa ahụ siri dị, ma tinye ya na 40 ℃ maka awa 24 mgbe ị mechibidoro okpu ahụ, na-enweghị nkwụsị;
06 Ọrụ chọrọ maka hoses
1. Nguzogide mkpakọ: rụtụ aka na ụzọ abụọ a
Mgbe etinyechara eriri ahụ na ihe dịka 9/10 nke ikike mmiri kachasị, kpuchie mkpuchi dabara adaba (ya na plọg dị n'ime kwesịrị ịkwado ya na plọg dị n'ime) ma tinye ya na igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ruo -0.08MPa ma debe ya. ya maka nkeji 3 na-enweghị mgbawa ma ọ bụ ntapu.
Họrọ ụdị 10 na-enweghị usoro site na ihe ọ bụla;tinye otu ibu ma ọ bụ oke mmiri dị ka ihe ntanetị nke ngwaahịa ọ bụla na tube sample, ma tinye ya n'ahịrị;jiri nrụgide a kapịrị ọnụ pịa tube ahụ kwụ ọtọ na statically maka nkeji 1, na mpaghara isi bụ ≥1/2 Ebe ikike nke akpa ahụ.
Enweghị mgbawa nke tube ma ọ bụ mkpuchi, ọ dịghị agbawa ọdụ, enweghị njedebe
20ml (g), 40ml (g)
2. Nleba ule: Budata ọdịnaya nke ikike a kapịrị ọnụ, mechie mkpuchi, ma daa n'efu na ala ciment site na elu nke 120cm.Agaghị enwe mgbawa, mgbawa ọdụ, ntapu, enweghị eriri, mkpuchi siri ike, na mkpuchi rụrụ arụ.
3. Oyi na nguzogide okpomọkụ (nnwale ndakọrịta):
Wunye ihe dị n'ime ya n'ime eriri ma ọ bụ gbanye ihe nlele n'ime ihe dị n'ime ya, tinye ya na 48 Celsius C na -15 Celsius maka izu anọ.Ọdọ mmiri ma ọ bụ mpempe ule na ọdịnaya ga-eru eru.
Nyochaa 1 batch n'ime batches 10 ọ bụla;wepụ 3 okpu nke ọ bụla ebu oghere si a ogbe nke ihe, na ngụkọta nke 20 setịpụ dakọtara na tube;tinye mmiri na otu ibu ma ọ bụ olu dị ka ihe ntanetị dị na tube;belata 1/2 Ọtụtụ ihe atụ na-ekpo ọkụ na 48 ± 2 ° C na igbe okpomọkụ na-adịgide adịgide ma tinye ya maka awa 48;A na-eme ka ọnụ ọgụgụ 1/2 nke ihe atụ dị jụụ na refrjiraeto ruo -5 ° C ruo -15 Celsius ma tinye ya maka awa 48;a na-ewepụta ihe nlele ahụ wee laghachi n'ime ụlọ okpomọkụ.nyocha nke mpụga.Ikike ntozu: enweghị mgbawa, nrụrụ (na-ezo aka na mgbanwe ọdịdị nke na-enweghị ike iweghachite), ngbanwe nke akụkụ ọ bụla nke tube na mkpuchi, na enweghị mgbawa ma ọ bụ agbaji na ọdụ nke eriri.
4. Nnwale na-acha odo odo: Tinye eriri n'okpuru ọkụ ultraviolet maka 24h ma ọ bụ 1 izu na anyanwụ, na ọ ruru eru ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe doro anya discoloration tụnyere ọkọlọtọ sample.
5. Nnwale ndakọrịta: Wunye ọdịnaya n'ime eriri ma ọ bụ tinye mpempe ule na ọdịnaya, ma tinye ya na 48 ° C na -15 ° C maka izu 4.Enweghị mgbanwe na eriri ma ọ bụ mpempe ule na ọdịnaya a na-ewere na ọ ruru eru..
6. Adhesion chọrọ:
Nnwale usoro peeling nke nrụgide nwere mmetụta: jiri teepu 3M 810 rube isi na akụkụ nnwale ahụ, na mgbe ịgbasachara (ọ dịghị egosipụta ekwenyere), ike na ngwa ngwa dọkasịa, enweghị nrapanye doro anya nke ink ma ọ bụ stampụ ọkụ na teepu (ink achọrọ. , na-ekpo ọkụ stamping kwụsịrị ebe
Ọdịnaya na-emetụta: Jiri mkpịsị aka etinyere n'ime ọdịnaya ka ọ na-etegharị azụ ugboro 20, ọdịnaya adịghị agbanwe agba na ink adịghị adapụ.
Bronzing agaghị dapụ na dayameta nke ihe karịrị 0.2mm, a gaghị agbajikwa ma ọ bụ gbajie.Ngbanwe nke ọnọdụ bronzing agaghị agafe 0.5mm.
Ihuenyo silk, eriri elu, bronzing: 1 batch maka batches 10 ọ bụla, a na-ahọrọ ihe nlele 10 site na nke ọ bụla n'ụdị ihe ọ bụla, tinye ya na mmanya 70% maka nkeji 30, elu nke eriri ahụ anaghị adapụ, na ọnụego ọdịda. bụ ≤1/10.
ngwugwu egwurugwu ShanghaiNye nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma otu nkwụsị. Ọ bụrụ na-amasị gị ngwaahịa anyị, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị,
Oge nzipu: Dec-15-2021